गुटैगुटको गूँड बन्यो प्रहरी
सुरक्षाको पहिलो पंक्तिमा रहनुपर्ने नेपाल प्रहरी गुटैगुटको गुँड बन्नपुगेको छ । नवराज सिलवाल गुटलाई पाखा लगाएर आइजीपी बन्न पुगेका प्रकाश अर्यालले अहिले सत्ताधारी गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनलाई प्रहरी फोर्सको भन्दा पनि प्रधानमन्बी रिसाउलान् कि भन्ने डर छ । गृहमन्त्रीभन्दा उनका लागि प्रधानमन्त्रीको आदेश महत्वको हुनेगर्छ र उनलाई चेन अफ कमाण्डभन्दा पनि आदेशको प्रतिक्षा रहिरहने गरेको छ ।
यसपछि प्रधानमन्त्रीकै प्यारा जेवी अर्थात जयबहादुर चन्दको गुट पनि कार्यरत छ । जयबहादुरलाई आइजीपी बनाउन नसकेपछि देउवाले प्रकाशलाई समातेका हुन् । अव जेवी कहिले पनि आइजीपी नबन्न सक्छन् किनभने उनीभन्दा सिनियर अर्कै निस्किेका छन् ।
प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक गुटबाजी यतिबिघ्न बढेको छ कि अव प्रहरीभित्र उत्साहभन्दा पनि गुटबाजी हल्किएको छ र फोर्सका लागि कामा गर्नेहरु निरास हुनपुगेका छन् । मौकामा चौका हान्नेहरुका लागि एउटा खबर सार्वजनिक भएको छ– अख्तियारमा र मालदार ठाउँमा सरुवा, पदस्थापना हुन प्रहरीभित्र प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ, राजनीतिक दबाब व्यापक बनेको छ । यसको अर्थ फोर्सभित्र अनुशासन र नियम होइन, राजनीतिक आदेश बढी चल्नेगरेको छ । यस्तो फोर्सले सत्य सेवा सुरक्षा देला कि कमाउतिर प्रहरी लाग्लान् ?
प्रहरी फोर्स स्वस्थ, स्वच्छ र व्यवसायिक हुनुपर्ने हो । प्रोफेसनालिजमले पहिलो महत्व पाउनुपर्नेमा पोलिटिक्सले महत्व पाउँदा नेपाल प्रहरीको साख नराम्ररी गिर्न पुगेको छ । प्रकाश अर्याल आएपछि त बचेखुचेको साख समाप्त भयो भन्ने आवाज बढी सुनिन थालेको छ । यसमाथि सुरक्षा फोर्सभित्रै भ्रष्टाचार र अनियमितता अनि यिनको चरित्र र व्यवहारमा पनि भ्रष्टाचार देखिन थालेपछि प्रहरी फोर्सले आफ्नो इज्जत गुमाउन पुगेको देखिदैछ ।
खिलराज सरकार प्रमुख थिए, सिनियर महिलालाई अन्याय गरेर उपेन्द्रकान्त अर्याललाई आइजीपी बनाएपछि प्रहरीभित्र डरलाग्दो पहरो गर्जिन थालेको हो । यो पहिरोको गति प्रकाश अर्यालको कार्यकालमा आएर अझ बढेको छ ।
भनिन्छ, यी अर्याल देखावटी आइजीपी हुन्, यथार्थमा आइजीपीको काम त पूर्व आइजीपी उपेन्द्रकान्तले चलाइरहेका छन् । जो पर्दा पछाडिबाट प्रकाशलाई कठपुतलीजसरी नचाइरहेको चर्चा व्यापक छ ।
एकातिर गुटबाजी, अर्कोतिर यस प्रकारको चर्चाले नेपाल प्रहरीको संरचना र यसको स्वच्छता र व्यवसायिकतामा ध्यान नदिने हो भने छिटै नेपाल प्रहरी खिया लागेको हतियारका रुपमा रहन पुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अव पनि नेपाल प्रहरीको क्षमता र निष्पक्षतातिर ध्यान नदिने ? अझै राजनीतिकरण गरिरहने ?